(Friday5June 2020)
एड्स विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित एड्स दिवस मनाईँदै
१५ मंसीर । एचआइभी एड्सबाट जोगिने उपाय तथा संक्रमितहरुको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यसहित शनिबार विश्व एड्स दिवस मनाईँदै छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १ का दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सन् १९८८ यता एचआइभी–एड्स विरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हाँसिल भएको छ । तर पनि अझै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका व्यक्तिको संख्या धेरै छ र उनीहरुलाई पहुँचमा ल्याउनु जिम्मेवारी हो ।
यस्तै एचआइभी संक्रमितहरुको पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । यसैगरी नयाँ संक्रमण नफैलियोस भन्नका लागि कण्डमसहितका सुरक्षित यौन साधनको प्रयोगमा जोड दिने र सुरक्षित यौन सम्बन्धबारे सचेत गराउने उद्देश्यसहित दिवस बनाउने गरिएको छ ।
विश्वमा अहिले तीन करोड ७० लाख मानिस एचआइभी संक्रमित छन् । यस्तै एक चौथाइ मानिसलाई आफूलाई एचआइभी संक्रमण रहेको थाहा नै नभएको अवस्था छ ।
एचआइभी पूर्ण रुपमा निको पार्ने औषधि अहिलेसम्म नबनेको भए पनि संक्रमितहरुलाई दीर्घ जीवन दिने औषधिहरु भने बनेका छन् । ती औषधिहरुमा पहुँचका लागि पनि परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि धेरै एचआइभी संक्रमितहरु अहिले पनि पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।
२०७५ मंसीर १५ मा प्रकाशित
विद्याज्योतिमा बालमैत्री 'बालसंसार' निर्माण हुने
छोरीका लागी नायिका रेखा गाउँ पसिन्
'सफा र सुन्दर सुर्खेत बनाऔं' : क्षेत्रीय प्रशासक प्रधान
Online Media Reg. No.: 70/073-74
Campus Road, Birendranagar-8
'सेरोफेरो' पिस एरा नेपाल प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित अनलाइन अखबार हो । यसको पक्षधरता सत्य, न्याय र शान्ति हो । व्यक्तिको सही सूचना पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै मानव अधिकारको वकालत गर्नु हाम्रो धर्म हो । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा सरकारको स्वेच्छाचरिताविरुद्ध खबरदारी गर्नुका साथै नैतिक एवं सबल राष्ट्र/राज्य निर्माणनै हाम्रो अखबारी अभियान हो ।
© 2017 Peace ERA Nepal Pvt. Ltd.
Developed by : Neil Dhakal